Imboni Engcono Kakhulu Yokulahlekelwa Kwamafutha Impushana
/Imikhiqizo/I-Weight Loss Powder
I-AASraw inikeza izinhlobo ze-powder yokulahlekelwa kwesisindo ngokuhlinzekwa okuzinzile, konke ukukhiqizwa kuqediwe ngaphansi komthethonqubo we-cGMP futhi ikhwalithi ingalandelelwa nganoma yisiphi isikhathi. Ngaphezu kwalokho, i-oda lenqwaba lingasekelwa ngentengo encintisana kakhulu.
1. Umlando Wezidakamizwa Zokunciphisa Isisindo
2. Ukuhlukaniswa Kwezidakamizwa Zokunciphisa Isisindo
3. Impushana Edume Kakhulu Yokunciphisa Isisindo Emakethe Engu-3
4. Indlela Yokuthenga I-Powder Ephumelelayo Yokulahlekelwa Kwesisindo Ku-inthanethi?
1.Umlando Wezidakamizwa Wokunciphisa Isisindo
Izidakamizwa zokuqala zokulahlekelwa kwesisindo, ezibizwa ngokuthi ama-fat reducers ngaleso sikhathi, zatholakala kuma-1800 ekupheleni. Nakuba lesi sidakamizwa senza imiphumela emibi kakhulu, saqhubeka sitholakalayo ukuze sisebenzise kuze kube yi-1960s.
Imithi emisha ebizwa ngokuthi i-Dinitrophenol yasungulwa kuma-1930 futhi yaziwa kakhulu ekulawuleni ukulahlekelwa isisindo. Lesi sidakamizwa senza umphumela we-thermogenic emzimbeni, ukusiza ukulahlekelwa isisindo.
Maphakathi no-1950, ama-amphetamines atholakala futhi abe yizidakamizwa zokulahlekelwa isisindo. Yenza ukulahlekelwa isisindo ngokunciphisa ukudla. Ngokudabukisayo, kwandisa ingozi yokushisa komfutho wegazi, okwenza ukuthi kukhishwe emakethe ku-1968.
Ku-1970, i-ephedrine yaba ukwelashwa okunqunyiwe okwehla kwesisindo. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa sabangela ukusabela okubi okubangele ukuthi kuthiwa yinto enobungozi.
Ku-1973, i-fenfluramine yamukelwa njengesisindo sokulahlekelwa isisindo. Ukuthandwa kwalo kwaphakama ku-1992 uma kuhlangene ne-phentermine ukudala isidakamizwa sokulahlekelwa isisindo esibizwa ngokuthi i-fen-phen. Ngokudabukisayo, lesi sidakamizwa sabangela ezinye izimbi ezimbi, okwaholela ekususweni kwawo emakethe ku-1997. Esikhathini sekhulu le-21st, izidakamizwa zokulahlekelwa kwesisindo, eziningi ezisekelwe ezinhlobonhlobo zemifino, zakhukhula emakethe.
2.Isisindo Sokuhlukaniswa Kwezidakamizwa
Izidakamizwa zokulahlekelwa kwesisindo zihlukaniswa zibe izigaba ezintathu ezinkulu ngokusho komsebenzi wazo futhi zimi kanje:
(1) Ukunciphisa ukudla (Ukudla)
Izidakamizwa zokudla okunciphisa ukudla zibizwa ngokuthi ama-sympathomimetic agents. Ngokuvame ukuvimbela ukufisa ukudla ngenkathi kudala ukuhlukumeza ngaphambi kokujwayelekile. Ukuzondwa yizwa "ukugcwele" umuzwa noma ukwaneliseka okutholakala ekutheni ukudla. Ukunciphisa ukudla kusebenza ngokulingisa i-neurotransmitter ebuchosheni bomuntu obulawula ukudla, okubizwa ngokuthi i-noradrenaline (NA).
Le mithi yabelana ngesakhiwo samakhemikhali esifanayo ne-NA futhi ingaba; ngenxa yalokho zibophezela kuma-receptors afanayo njenge-noradrenaline. Izidakamizwa ziphinde zithuthukise umsebenzi we-noradrenaline "esikhungweni sokudla" sobuchopho bomuntu, i-hypothalamus. I-hypothalamus yomuntu ilawula ibhalansi yamandla ohlelweni lomzimba. Ulwazi mayelana nezitolo zamandla ngamanye luhlanganiswa ku-hypothalamus elawula ukudla kanye nesifiso sokudla. Ukubophezela kwe-noradrenaline nomsebenzi ku-hypothalamus kunomphumela onciphisa isifiso sokudla. Izidakamizwa ezinjalo zihlanganisa:
(2) I-Fat Burning
Izidakamizwa zokulahlekelwa isisindo ezishisa amafutha zingasiza ukulahlekelwa kwamafutha ngokunciphisa izifiso, ukuthuthukisa imetabolism, nokugcina ukudla okunempilo. Bangaphinda bakhulise amandla okujima ngokuthuthukisa amandla nokugxila. Izidakamizwa ezinjalo zihlanganisa:
❶ I-Synephrine CAS: 94-07-5
❷ I-DMAA/1,3-Dimethylpentylamine CAS: 13803-74-2
(3) Thuthukisa ukugaya
Lezi zidakamizwa zokulahlekelwa kwesisindo ziphazamisa ikhono le-digestion system ukuze lithinte izakhi ezithile zokudla. Ngokwesibonelo, i-Orlistat iyaziwa ukuvimbela ukuphazamiseka kwamafutha futhi ngaleyo ndlela ivimbela ukungena kwamanoni. Kunezinye izithako eziningana ezisebenzisiwe ekunciphiseni uketshezi lwe-caloric nokuvinjelwa kokuvimbela. Kulokhu okuthunyelwe, sizoxoxa okuningi mayelana nemithi elandelayo:
❷ I-Cetilistat CAS: 282526-98-1
3.Impushana Edume Kakhulu Yokunciphisa Isisindo Emakethe Engu-3
I-Orlistat iyi-pancreatic enamandla ne-gastric lipase inhibitor. Zonke izinhlobo ze-triglyceride ezidliwayo zihlanganiswa ngokusizwa kwe-pancreatic kanye ne-lipases yesisu. I-lipases i-enzymatically iphula phansi i-triglycerides ibe ngamafutha angamahhala angasetshenziswa kamuva emathunjini amancane. I-gastric ne-pancreatic lipase inhibitors zakha izibopho nge-pancreatic ne-gastric lipases ku-lumen yesisu esincane nesisu okwenza lezi zinzyme zingakwazi ukusebenza kahle.
Ngokuvinjelwa kwesenzo salezi lipases, ukugaya okunamafutha okudliwayo nakho kuvinjelwe, futhi i-triglyceride iyadonswa emanzini. I-Orlistat izidakamizwa zokulahlekelwa isisindo zivimbela amaphesenti angu-30 wamafutha enomsoco ekudleni kokungena emzimbeni womzimba womuntu (lapho amaphesenti angu-XNUM amandla okudla ehlinzekwa yi-triglycerides). Isilinganiso sokuncipha kwesisindo ngemuva konyaka owodwa ngenhlanganisela ye-Xenical (orlistat) kanye nezinguquko endleleni yokuphila zizungeze i-30 kg.
Kanye nokunciphisa ukumuncwa kwe-triglycerides yokudla, i-orlistat isisindo sokulahlekelwa kwesisindo sitholakale ku:
Yiba nomphumela omuhle ekucindezelweni kwegazi;
Yehlisa ukumuncwa kwe-cholesterol futhi ngenxa yalokho amazinga e-cholesterol (kanye ne-LDL cholesterol);
Khulisa ukumelana ne-insulin; futhi
Khulisa ukulawulwa kwe-glycemic.
Kucatshangwa kabanzi ukuthi imiphumela emibi ye-orlistat ye-gastrointestinal yenza ngendlela efanayo ekuqiniseni okungalungile, okukhuthaza labo abakulo muthi ukuthi babambelele ngokuqinile ekudleni okunamafutha amancane.
I-Cetilistat iyasebenza ngomlomo, inoveli, i-pancreatic kanye ne-gastrointestinal lipase inhibitor. Umuthi we-Cetilistat wokunciphisa isisindo umuthi owenziwe ukwelapha ukukhuluphala. Isebenza ngendlela efanayo nesidakamizwa okuxoxwe ngaso ngaphambili esaziwa ngokuthi i-Xenical (orlistat) ngokulawula i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathunjini ethu. Ngaphandle kwalawa ma-enzyme, ama-triglycerides avela ekudleni kwethu ayavinjelwa ukuthi angagaywa abe ama-fatty acids mahhala angamuncwa futhi akhishwe emzimbeni angagayeki.
Ezilingo zomtholampilo ezibandakanya iziguli ezinamandla kakhulu ngaphandle kohlobo lwe-2 sikashukela kanye neziguli ezigqamile eziphila nohlobo lwe-2 yesifo sikashukela. Lapho i-Cetilistat yokulahlekelwa isisindo i-powder yayinikezwa amasonto ayishumi nambili, isinciphisa kakhulu isisindo somzimba, i-cholesterol esiphelele, i-serum low-density lipoprotein cholesterol ngokushesha ngokuqhathaniswa ne-placebo.
Iphesenti yeziguli ezikhulu kakhulu ezibonisa ukunciphisa okukhulu kwesisindo somzimba esisezingeni eliphansi okungenani amaphesenti angu-5 bephezulu kuzo zonke izingalo ezisebenzayo kuqhathaniswa ne-placebo. Ezigulini zesifo sikashukela ngokweqile, amazinga e-HbA1c (glycosylated hemoglobin) nawo ayehliswa kakhulu. Ukusebenzisa izidakamizwa ukulahlekelwa kwesisindo kubonisa ukuthi kunomthelela owenzela imiphumela emibi kakhulu, okwenza ukuba i-steatorrhea (imvelo yamathumbu) ibe nesisindo esiphansi kune-orlistat. Lesi sidakamizwa sisanda kuvunywa eJapan ukuphatha ukukhuluphala nezinye izinkinga.
I-Lorcaserin HCl yezidakamizwa isebenza ukulawula imetabolism kanye nesifiso sokudla. Umuthi wamukelwa yi-FDA ngonyaka ka-2012 kubantu abane-BMI engaphezu kuka-30, kanye neziguli ezine-Body Mass Index engama-27 noma ngaphezulu nazo ezine-cholesterol ephezulu, umfutho wegazi, kanye nohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2. Umuthi futhi usebenza ukuthuthukisa i-serotonin 2CV receptor ebuchosheni bomuntu engasiza iziguli ukuthi zizizwe zigcwele ngemva kokuthatha kancane. Ezivivinyweni zezokwelapha, u-38% wabantu abadala (ngaphandle kohlobo 2 sikashukela) balahlekelwa ngaphezu kuka-5% wesisindo somzimba wabo, uma kuqhathaniswa ne-16% yabantu abadala abaphathwa nge-placebo. Njengoba i-sibutramine powder ivinjelwe e-China, i-lorcaserin hcl powder iyindawo engcono kakhulu emakethe futhi abahlinzeki abaningi abazibophezele ekukhiqizeni izidakamizwa zokulahlekelwa isisindo bakhetha ukusebenzisa i-lorcaserin hcl powder.
4.Indlela Yokuthenga I-Powder Ephumelelayo Yokulahlekelwa Kwesisindo Ku-inthanethi?
Njengoba kuboniswe kwingxoxo yethu eningiliziwe, kunezidakamizwa eziningi zokulahlekelwa kwesisindo ngaphandle lapho zitholakala ezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zezinto eziphilayo. Iningi lalezi zidakamizwa zitholakale ziphumelela, kanti ezinye zazo ziye zavunywa yiziphathimandla ezihlukahlukene ezifana ne-FDA neJapane, ukubalula ezimbalwa, ukwelashwa kokukhuluphala.
Ngemva kokuchitha amahora amaningi sicwaninga ngezidakamizwa zokunciphisa umzimba, sikwazile ukuhlonza Izithasiselo Zempushana Zokunciphisa Isisindo Ezithengiswa Kakhulu Zango-2018 Emhlabeni. Lezi zithako ze-powder zokulahlekelwa isisindo zihlanganisa i-orlistat yokulahlekelwa isisindo powder kanye ne-lorcaserin yokulahlekelwa isisindo powder. Ngokungafani nobuhlanya bezithako zokwehlisa isisindo ezitholakala kunoma yisiphi isitolo sezidakamizwa, le mithi yokunciphisa isisindo enqunywe ochwepheshe bezokwelapha isidlule iminyaka yokuhlolwa ukuze ithole isitembu sokugunyazwa yi-FDA nakwezinye izindawo ezimbalwa. Sincoma kakhulu ukuthi uzame le mithi ngoba ifakazelwe ukuthi ayisebenzi nje kuphela kodwa futhi iphephile ukuyisebenzisa.
Ungase ubuze ukuthi ungayithenga kanjani i-powder yokulahlekelwa kwesisindo esebenzayo i-orlistat powder kanye ne-lorcaserin hcl powder. Baningi abahlinzeki bempushana yokulahlekelwa isisindo ku-inthanethi futhi badinga ukuthola ukuthi iyiphi engcono kakhulu kuwe. Udinga ukunaka kakhulu izinga lemikhiqizo nokuthi ingathunyelwa kuwe iphephile, uma udinga ukuthenga i-powder yokulahlekelwa isisindo ngobuningi, kufanele wazi ukuthi uhlelo lwabo lokuhlinzeka nokuthi luzinzile yini, cabanga ngokuthatha i-oda lesampula ngaphambi kobuningi. oda, ukuthathe uyohlolwa ku-professional 3rd-Labs futhi uhlole izinga. Noma kunjalo, ukuthola umhlinzeki wekhwalithi ephezulu akuzona izinto ezilula, udinga ukubeka isikhathi esiningi namandla kukho.
Ukuthenga izidakamizwa ezihlakaniphile zokulahlekelwa isisindo/ukudla okuyimpushana eluhlaza kudinga ukuqapha kakhulu, ikakhulukazi ngokuthenga ku-inthanethi kwamanye amazwe. Kunemithombo emibili eminingi ethi ihlinzeka ngezimpahla ezihlakaniphile kodwa ezifakazelwa njengabakhohlisi. I-AASraw inikeza futhi inikeza kuphela izimpahla ezihlakaniphile. Kuqashelwa iningi labantu kanye nezinkampani, zinganikeza i-powder yokulahlekelwa kwesisindo esiningi, njenge-lorcaserin hcl, i-orlistat, i-Cetilistat. Imibiko yokuhlola yobungcweti ingabiwa futhi ibonisa ubumsulwa obungu-98%. Ungakhuluma nokuthengiswa kwe-aasraw ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ku-inthanethi!
I-1.I-lorcaserin ikusiza kanjani ukuthi ulahlekelwe isisindo?
Ukuze ulahlekelwe isisindo, i-Lorcaserin isebenza ngokuthinta umuzwa womzimba wokuzizwa ugcwele ngokushintsha amazinga e-serotonin ebuchosheni. Kungale ndlela i-Lorcaserin ingasebenza ngayo ukuphatha ukulutha kwe-opioid.
2.Ingabe i-lorcaserin hcl powder ilawulwa?
Nakuba kungeyona into evuselelayo, i-lorcaserin cishe ingabangela ukuxhomeka kwezidakamizwa nokuhlukunyezwa. Ngenxa yalesi sizathu, i-Drug Enforcement Administration (DEA) ibhalise ngaphansi koMthetho Wezakhiwo Ezilawulwayo kuSheduli IV.
Ngakho-ke, zilawula kanjani umthamo womuntu? Ngizochaza. Ukudlula ngokweqile kungahle kwenzeke ngengozi kodwa kungase futhi kube ukunyakaza okuhlose ukukhuthaza umsebenzisi. Ukuze ulethe imvelo, ungagcwalisa kuphela imiyalelo yezinombolo ezinqunyelwe izikhathi.
Eminye yemiphumela emibi ye-lorcaserin ihlanganisa ukucabangela, ukuzwa 'ukuphakama', ukuguqulwa, noma ukujabula. Ezimweni ezimbalwa, ezinye iziguli eziyeke umthamo zibonisa izimpawu ezithile zokuhoxiswa. Zonke lezi zinto ziwubufakazi obanele bokuthi imithi ingabangela ukuxhomeka kwengqondo.
I-3.Ingabe izidakamizwa zokulahlekelwa isisindo i-lorcaserin hcl ziphephile?
Ucwaningo olukhulu luye lwathola imiphumela ethembisayo yokuphepha kwesidakamizwa sokulahlekelwa isisindo esitholakala e-US. Ucwaningo, olushicilelwe ku-New England Journal of Medicine, luthi abantu abadala abasebenzisa izidakamizwa i-lorcaserin balahlekelwe isilinganiso se-4kg (8.8lb) ngaphezu kwe-40 izinyanga. Ithi umuthi, osebenza ngokucindezela ukudla, awubeki abantu engcupheni enkulu yezinkinga zenhliziyo. Kodwa ochwepheshe bagcizelela ukubaluleka kwezinguquko zesikhathi eside zokuphila ekufezeni ukulahlekelwa kwesisindo esiphumelelayo.I-Lorcaserin itholakale e-US iminyaka eminingana ngaphansi kwegama elithi Belviq, kodwa ayikavunyelwa ukusetshenziswa eYurophu.
I-4.Ingabe i-Orlistat iyasebenza ekulahlekeni kwesisindo?
I-Orlistat isebenza ngokuvimbela amafutha ekudleni okudlayo ukuthi angangeni emzimbeni wakho. La mafutha agcina ephuma emzimbeni ngendle yakho.
Ukuze i-Orlistat isebenze, kufanele isetshenziswe ngokuhambisana namanye amaqhinga okwehlisa isisindo. Lokhu kuhlanganisa uhlelo lokuvivinya umzimba njalo kanye nohlelo lokudla okunempilo. Uma ithathwa ngokwayo, i-Orlistat ingase inganciphisi isisindo, njengoba ingashisi amafutha akhona.
Ucwaningo olulodwa lwathola ukuthi abantu abathatha i-Orlistat futhi bagcina ukudla okunekhalori ephansi balahlekelwa ngokwesilinganiso samatshe angu-1.25 (8.1kg) ngonyaka, okwakungu-6lb (2.8kg) ngaphezu kwalabo abangazange bathathe i-Orlistat ngesikhathi esifanayo. Olunye ucwaningo luthole ukuthi iziguli ezikhuluphele ezingama-743 ezithatha i-Orlistat ukuze zinciphise isisindo zehle ngokwesilinganiso se-10.3kg yesisindo ngemuva konyaka owodwa. Lokhu kuphambene neziguli eziyi-6.1kg ezingathathi i-Orlistat ezilahlekile.
Olunye ucwaningo luphinde lwathola ukuthi abantu abalandela le nkambo yokwelashwa bangahle bafinyelele ku-10% wesisindo somzimba wabo ngonyaka.
5.Ubani okufanele asebenzise i-orlistat powder?
I-Orlistat yokulahlekelwa isisindo ithathwa kangcono yilabo abalwela ukulahlekelwa isisindo ngezinye izindlela. Ngaphambi kokuqala i-Orlistat, bekufanele uqale uzame ukwehlisa isisindo ngokudla okulawulwa yikhalori nokuzivocavoca njalo. Kufanele futhi ucabange ukuyeka ukubhema nokunciphisa ukuphuza utshwala ngaphambi kokuthatha imithi. Ngemuva kokuthatha i-Orlistat amasonto ambalwa, ungalindela ukubona ukwehla kwesisindo okumangazayo. Inani langempela liyahlukahluka phakathi kwabantu, kuye ngokudla kwabo kanye nendlela yokuzivocavoca.
Ukubuyekezwa kwe-6.Orlistat powder: ngaphambi nangemva
Zak (4th, Mar. 2021): Lolu wuhlelo lokuqala lokwehlisa isisindo engikwazile ukunamathela kulo. Ngincoma kakhulu i-Orlistat powder. Uma ungayithandi "imiphumela yokwelashwa", khona-ke uyawabuka ngempela amafutha akho! Angikwazi ukusho okwanele nge-Orlistat powder. Ngithole ukuthi ngingaba nezinhlobonhlobo zokudla - kodwa usayizi wengxenye uwukhiye!
U-Jimmy(16, Ephreli 2020): Amaviki angu-3 kuze kube manje amahle kakhulu njengoba ngithenga i-orlistat powder ku-inthanethi futhi ngizame okunye. Ngehla ngesisindo kancane okuyinto engiyifunayo ukuze ngingabi nayo i-yoyo affect. HLALA ekudleni kwakho okunamafutha amancane. Ngadla i-pizza ngolunye usuku futhi ngalandela nezingcezu ezimbili zebhulakufesi futhi ngakhipha okusawolintshi okunamafutha lapho ngikhipha igesi noma phakathi nokukhipha amathumbu. Yebo izokwazisa uma udle kakhulu noma into engalungile. Bala ama-calories akho idla imifino nezithelo eziningi. Phuza amanzi. Ngemva kokufunda abanye side affects kuyangisiza ukunamathela Alli ngoba uma kwenzeka uzonwaya ikhanda lakho ngomcabango UhUh, oh cha, wena ukudlala ngami.
Bob(24th, Sep. 2021): Ngilahlekelwa amakhilogremu angu-6 ngesonto elilodwa nge-orlistat powder .. kodwa ngidla ukudla okunempilo mon thru fri: ukudla okunamafutha aphansi nama-calories aphansi kanye nempelasonto ngidla noma yini elinganiselwe. Futhi, ngihamba imizuzu engama-45 nsuku zonke futhi ngidlala ithenisi amahora ama-3 ngihlezi.
Njengoba ukubuyekezwa okungenhla kufakaza, umuzwa wamakhasimende ethu we-Orlistat njengomuthi wokwehlisa isisindo muhle kakhulu. Nazi izinto ezimbalwa ezibalulekile eziqokonyiswe ukubuyekezwa kwamakhasimende ethu e-Orlistat:
♦ Isebenza ngempumelelo ekusizeni iziguli ukuthi zehlise isisindo
♦ Kuhle kakhulu ukuqala uhlelo lokunciphisa umzimba
♦ Kuwusizo ekwehleni kwesisindo esihamba kancane kodwa esiqhubekayo samasonto onke
♦ Kuyasiza futhi ekwehliseni amazinga e-cholesterol
Sekukonke, amakhasimende ethu akhomba ku-Orlistat njengendlela ethembekile nesebenzayo yokwehlisa isisindo.
7.Iyini imiphumela emibi ye-orlistat?
Imiphumela emibi evamile ye-Orlistat
Imiphumela emibi evame kakhulu ye-Orlistat ivamise ukuthinta umuntu oyedwa kwabayi-10. Lokhu kufaka ngezansi, kodwa umphumela ovame kakhulu ukukhanda ikhanda:
▪ Indle enamafutha noma enamafutha noma okuphuma amafutha endunu yakho — bheka izindawo ezinamafutha engutsheni yakho yangaphansi
 Ukukhipha ithumbu ngokushesha noma ukwanda
▪ Ukwanda kwe-flatulence, ngezinye izikhathi nokuphuma koketshezi
▪ Ukuphathwa yikhanda
 Izifo zemigudu yokuphefumula ephezulu (RTIs), njengomkhuhlane
Izinhlungu zesisu noma ukungaphatheki kahle
Yonke le miphumela ingeyesikhashana futhi kufanele idlule ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke, uma uhlangabezana nazo isikhathi eside, noma ziba zimbi kakhulu, thintana nodokotela wakho ngokushesha.
Imiphumela emibi engajwayelekile ye-Orlistat
Imiphumela emibi ye-Orlistat engezansi ayijwayelekile kakhulu kunaleyo ebalwe ngenhla futhi ifaka:
▪ Indle ethambile
▪ Ukungakwazi ukuzithiba kwendle
▪ Ukuphazamiseka kwezinsini noma amazinyo
▪ Ukuqunjelwa — lokhu kuvame ukutholwa abantu abanesifo sikashukela sohlobo 2
▪ Izikhathi ezingajwayelekile
▪ Izifo ezisezansi zokuphefumula
▪ Ubuhlungu noma ukungaphatheki kahle
Uma uhlangabezana nanoma yimuphi wale miphumela emibi isikhathi eside noma izimpawu zakho ziqala ukuba zimbi kakhulu, khuluma nodokotela wakho ngokushesha ngangokunokwenzeka.
I-8.Ngingayinciphisa kanjani imiphumela emibi ye-Orlistat?
Imiphumela emibi eminingi ye-Orlistat ingeyesikhashana futhi ihamba nesikhathi. Uma imiphumela yakho engemihle ingaqedi, khuluma nodokotela wakho ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kungenzeka ukunciphisa imiphumela emibi ye-Orlistat ngokulinganisa ukuthi udla amafutha angakanani ekudleni ngakunye.
I-Orlistat isebenza ngokumisa amafutha ekudleni kwakho ukuthi angangeni emathunjini. Ikhipha amafutha angamuncwanga emathunjini. Kodwa-ke, i-Orlistat ingasusa kuphela amafutha amaningi ngokudla ngakunye. Ngenxa yalokho, uma udla ukudla okunamafutha angaphezu kuka-1-15 amagremu, ungase ube nemiphumela emibi ye-Orlistat kaningi. Ukuze unciphise imiphumela emibi ye-Orlistat, ungadli ngaphezu kwe-1-15 amagremu wamafutha ekudleni ngakunye uma uthatha amaphilisi e-Orlistat ayi-120 mg.
Ungakwazi futhi ukunciphisa imiphumela emibi ye-Orlistat ngokunamathela kumthamo olungile we-Orlistat. Ukuthatha okungaphezu komthamo onconyiwe we-Orlistat ngemuva kokudla kwandisa imiphumela yayo emibi, ngakho-ke namathela kumthamo onconyiwe.
9.Ingabe ukusebenzisa i-Cetilistat powder ukuphatha ukukhuluphala?
Ukukhula okukhulayo kokukhuluphala kuye kwashukumisa ukufuna izidakamizwa ukuphatha lesi simo. Kunezinqubo ezihlukahlukene zokwelapha eziye zahlolwa, kubandakanya:
▪ I-Serotonin ne-noradrenaline reuptake inhibitors (i-anorectic agents)
▪ Ama-Lipase inhibitors
▪ Ama-Leptin agonists
▪ Ama-agonists e-Melanocortin-3
▪ Ama-endocannabinoid receptor antagonists
I-Cetilistat powder iyi-lipase inhibitor, enemodi efanayo yesenzo somuthi we-Roche's anti-obesity orlistat powder owathola imvume yokulawula ku-1997. Lezi zidakamizwa zisebenza emgudwini wamathumbu ukuze zivimbele i-lipases, ama-enzyme ahilelekile ekuqhekekeni kwamafutha okudla. Ngokuvimbela ukuwohloka nokumuncwa okulandelayo kwamafutha asuka emathunjini, ama-lipase inhibitors anciphisa ukudla kwamafutha nama-calories, ngaleyo ndlela asize ukulahlekelwa kwamafutha.
I-10.Orlistat Powder Vs Cetilistat powder
izinto I-Orlistat Powder I-Cetilistat powder
Inombolo ye-CAS 96829-58-2 282526-98-1
Inqubo yesenzo I-Orlistat ayisebenzi ngokucindezela ukudla; kunciphisa inani lamafutha umzimba wakho uwamunca ekudleni okudlayo. I-Cetilistat iyi-inhibitor ye-lipase yamathumbu evimbela ukugaya kwamafutha kanye nokumuncwa, okuholela ekunciphiseni ukungena kwamandla, futhi ngaleyo ndlela ukulahlekelwa isisindo.
Isikali 120 mg ngomlomo kathathu ngosuku ngokudla okuyinhloko okuqukethe amafutha. I-120 mg kathathu ngosuku ngemuva kokudla ngakunye.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo ▪ Igesi edlulayo, ngezinye izikhathi ibe namabala anamafutha
▪ Indle exegayo, indle enamafutha, noma isifo sohudo
 Ukuqunjelwa njalo noma ukuphuma amathumbu okunzima ukuwalawula
▪ Indle exegayo
▪ Ukungakwazi ukuzibamba kwe-fecal
▪ Umlomo Owomile
Izibuyekezo ☆))) ☆))
 "Izinkinga ze-FDA Incwadi Yempendulo Ephelele ye-Lorcaserin Isicelo Esisha Sezidakamizwa". 23 Okthoba 2010. Kufakwe kungobo yomlando kusukela kokwangempela ngomhla ka-24 Okthoba 2010.
 Higham, George (5 Juni 2020). “ᐅ Orlistat & Xenical: Ingabe Amaphilisi Okunciphisa Isisindo Ayasebenza? | I-e-Surgery”. i-e-surgery. Ibuyiselwe ngomhlaka-9 Juni 2020.
 "Amaphilisi e-Fake Alli angabeka impilo engozini". CNN. 23 January 2010. Ibuyiselwe ngomhla ka-24 January 2010.
 Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K: Cetilistat (ATL-962), inoveli ye-pancreatic lipase inhibitor, ithuthukisa ukuzuza kwesisindo somzimba futhi ithuthukise amaphrofayili e-lipid kumagundane. IHorm Metab Res. 2008 Aug;40(8):539-43. doi: 10.1055/s-2008-1076699. Epub 2008 May 21.
 Devarajan, Uma (1 Mashi 2009). "Izinkinga zamafutha". I-Deccan Chronicle. Ibuyiselwe ngomhla ka-26 Novemba 2009.
 Enziwe isitayela ngosonhlamvukazi abancane a ephaketheni, kanye nebha phezu kuka-i (okungukuthi, “alī”), kodwa onosonhlamvukazi ngokwejwayelekile kumanuwali.
 I-Pollack A (16 Septemba 2010). "Iphaneli ye-FDA Yenqaba Iphilisi Lokudla". I-New York Times. Kulondolozwe kusukela kokwangempela ngomhla ka-17 Julayi 2011.
 "I-Lorcaserin Sebenzisa Ngesikhathi Sokukhulelwa". Drugs.com. 4 Novemba 2019. Ibuyiselwe ngomhla ka-14 Januwari 2020.
 Padwal, R (2008). "I-Cetilistat, i-lipase inhibitor entsha yokwelapha ukukhuluphala". Umbono Wamanje Ezidakamizweni Eziphenyayo. 9 (4): 414–21. PMID 18393108.